'Wallaansi WBO'f taasifame kan summiitii malee kan faalama baakteeriyaa miti' - BBC News Afaan Oromoo
'Wallaansi WBO'f taasifame kan summiitii malee kan faalama baakteeriyaa miti'
Goodayyaa suuraa Miseensota ABO Xoollaay gara mana yaalaatti wal geeessaa jira.
Itti Aanaan Komishinii Poolisii Oromiyaa Komishinar Rattaa Balaachew sababni miidhaa miseensota WBO leenjiif Xoollaay turan irra gahee qoratamaa jira jedhan.
Komishinerichi namootni 134 tahan hospitaala Qiddus Luqaas Walisootti yaalamaa jiru jedhanii lubbuudhaaf waanti sodaachisu hin jiru jedhan.
Dilbata darbe ganama sa'a tokkotti ciree yeroo nyaatan 'shayeen dhugne dhamdhama addaa qaba' jedhanii booda akka isaan ballaqamsiise nutti himani jedhan. Kanaafis yaalii akka argatan taheera jedhan.
Qaamni gaggeessaa mooraa sana jiru ammoo shayee sana dhamdhamanii homaayyuu isaan hin goone jedhan.
Shayee sana keessa maaltu jira kan jedhuuf ammoo samudni fudhatamee qaama qoratuuf ergameera, jedhan Komishiner Rattaan.
"Nuyi summii waliin walqabata kan jedhu hin qabnu." Qaamni qoratu yoo summii of keessaa qaba jedhe garuu qoratamee qaama kana raawwatee irratti tarkaanfii fudhachuudha jedhan.
Garuu yaada ogeessotaa mallattoowwan ilaalanii summii tahuu danda'a jedhu guutummaatti hin fudhanne.
Ogeessotni fayyaa waan qoratan irraa ka'uun kana tahuu danda'a jedhanii tilmaamuu danda'u jedhan. Amma garuu summii tahuu danda'a jechuuf qorannoo irratti waan hin hundoofneef rakkoo taha jedhan.
WBO Xoollaay summii moo faalama nyaataatu mudate?
Miidiyaalee biyya keessaaf summiidha kan jedhamu soba jechuun ibsi kennamee ture. Kana ilaalchisee 'summii miti' jechuuuf ammoo bu'aa qorannoo maalii irratti hundooftan gaaffii jedhuuf aanga'aan kun "odeeffannoo namoota mooricha irraa arganne malee ani ofiikoo bakkicha hin turre," jedhan.
Dabalataan gaggeessitootni moorichaa shayee isa miidhamtootni irraa dhuganiiru jedhame irraas waan dhamdhamanii ilaalaniif jedhan.
Haatahu malee, shayee sanatu faalame yoo tahe ammoo maaliif qondaaltonni waliin dhamdhaman hin dhukkubsanne kan jedhuuf garuu deebii hin laanne.
"Summiidhaan wal hin qabatu yoo kan biraa jiraate malee jechuun kan ibsa kennan namootuma achi jiranidha."
Dr. Abdullaxiif Isiyaaq hospitaala Qiddus Luqaas Walisoo irraa hanga ammaatti namootni 154 yaalii argachaa jiru jedhanii, fayyaan isaaniis haala gaarii irratti akka argamu himaniiru.
Fayyaan isaanii foyya'uu kan danda'eef "yaalii keemikaala qaama keessa jira jennee isaaniif taasifneen malee kan faalama nyaatadhaan miti," jedhan Dr Abdullaaxiif.
Qorichi kennaafii turanis kan baakteeriyaa sababa faalama nyaataan dhufu balleessu ykn irraa fayyisu osoo hin taane waanuma summii waliin wal qabatedha.
Baakteriyaa jennee waan shakkines hin qabnu. Osoo baakteriyaadha tahee qaama gubaa illee qabaachuu danda'a. Kunis mul'achaa hin jiru.
Rakkoon isaanii mataa dhukkubbii, dhiiga haaqqisiisuu, fi garaa gubaadha jedhanii kun ammo faalama nyaataa ykn baakteriyaa waliin wal hin qabatu jedhan.
Dabalataan shayeen tempirechera digirii selshiyeesii 50 ol irratti danfa jedhanii baakteeriyaan as keessa jiraachuu hin danda'u jedhan.
Gabaasota dhagahaa turre waliin haalichi wal hin fakkatu kan jedhan Dr Abdulaatiif bishaanitti keemikaala 'Wuhaa Aggariitu' baay'ate kan jedhu yoo tahe namootni mooraa sana keessa jiranis miidhamuu malu ture jedhan.
Miidhamtootni amma yaalaa argataa jiran waraana ABO meeshaa hiikkatee leenjiif gale qofa tahuus himanii bishaan isaan kunnen dhugan qofaatti yoo jiraate malee akkamitti garee tokko hubuu danda'a kan jedhus itti dabalaniiru.
Dhiigni, fincaanii fi bobbaan namoota yaalamaa jiranii qorannoodhaaf hospitaala biraa Finfinnee jirutti ergameera jedhan.
Bu'aa qorannichaanis waan guutummaa isaa adda baasnu taha jedhan Dr Abdullaatiif. Gama biraan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Admaasuu Daamxee summii kan jedhame soba jedhanii jiru.
Komishniin Poolisii Oromiyaa miseensota waraana ABO leenjii galan akkamitti ilaala?
Gaaffii BBC'n miseensota waraana ABO kanneen mootummaan naannoo akka lammii Oromoo Oromiyaaf qabsaa'uu fi nageenya Oromiyaaf leenji'aa jirutti moo akkaataa garaagarummaa yaadaa paartii ABO fi ODP gidduutti ilaaltu? jedhee gaafateef Komishinerichi nuyi Kanaan duras warra Eertiraa irraa dhufan irratti akkuma gochaan nargarsiifne akka Oromootti ilaalla jedhan.
''Waliin hojjechuuf, waliin hidhachuuf, irree tokko tahuun waliin tahuun tokko taanee hojjechuuf.
Ergamni keenya nageenya Oromiyaa eegsisuuf hojjechuu waan taheef namni heera mootummaa kabajee hojjechuu barbaadu waliin hojjechuuf qophiidha'' jehan.
Bofti pireezidaantii Laayibeeriyaa waajjiraa baase
Roobootiiwwan TV irratti oduu dhiyeessan